BitTorrent Zvino inouya ku iPhone, iPad, uye Apple TV | IPhone nhau
BitTorrent Zvino inouya ku iPhone, iPad, uye Apple TV
Pane zvishoma zvasara kutanga mwedzi waJuly, kuwedzera nhasi izuva re "kuratidzwa" saka chii chiri nani pane Nakidzwa nemikana yese yatinopihwa ne iDevices. Tarisa mafirimu, teerera kumimhanzi, tamba mutambo, verenga bhuku, kana kutora mifananidzo. Ehezve, ngatiedzei kuita zvese zviri pamutemo nekuti kune vanhu kuseri kweizvi zvese vanorarama nekugadzira zvemukati ...
Nezve iyo yekupedzisira, vazhinji venyu muchaziva BitTorrent, inozivikanwa app yekurodha pasi Torrents mafaera, iko kunyorera uko kwakapatsanurana kwakasiyana kusvika padanho rekugadzira peer-to-peer faira rekutsinhana network. Haisisiri kungoshandiswa kurodha mafirita emafirimu, software, kana chero imwe zvemadhijitari zvemukati (ngatibude pachena). Saka zvino BitTorrent inouya ku iPhone, iPad, uye Apple TV, ine BitTorrent Zvino. Ehe, mirira kurodha pasi nekuti pamwe kwete zvaunotarisira… Mushure mekusvetuka tinokupa rumwe ruzivo.
Izvo app izvo ichaburitswa mumazuva mashoma anotevera kune ese maDevices inobvumidza chero mushandisi kuona mu kuyerera mavhidhiyo asingagumi nemumhanziEhe, kanganwa nezve izvo zvisiri pamutemo zvemukati zvaunogona kuwana kuburikidza nechero Torrent, neBitTorrent Zvino iwe uchaona chete zvemukati zvinogamuchirwa ivo pachavo, unogona kunakirwa zvese zvakabhadharwa uye zvemahara zvemukati. Iyo modhi freemium Zvichakwanisika zvakare kuburikidza nezviri mukati izvo zvichaperekedzwa nekushambadzira.
BitTorrent Zvino inotangisa sepuratifomu yekuzivisa matarenda matsva, vaimbi vatsva, maartist matsva, uye vagadziri vatsva vemafirimu. Saka hongu, Habemus ipuratifomu nyowani yemultimedia. Ehe, izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa izvozvo tingadai takafarira (chaizvo) zvakanyanya vezera kune vezera sevhisi yakasimudzirwa neBitTorrent pane yedu iPhone's, iPad's, uye zvakadii needu Apple TV's ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » BitTorrent Zvino inouya ku iPhone, iPad, uye Apple TV
Hatisisina YouTube yeiyo zvakare?
Netflix yaizoda kubvumidza kutamba kunze kwenyika gore rino